Madaxweynaha Barcelona oo u hambalyeeyay Messi iyo De Jong, kaddib xafladii xalay abaal marinada FIFA ee The Best – Gool FM
(Barcelona) 24 Sebt 2019. Madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa u hambalyeeyay xiddigaha kooxda reer Catalonia ee Lionel Messi iyo Frenkie de Jong kaddib xafladii abaal marinada FIFA ee “The Best” ee xalay lagu qabtay magaalada Milan ee dalka Talyaaniga.
Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST, waxaana uu ku guddoomay magaalada Milan oo xalay abaal-marinnada FIFA lagu bixinayo, halka Frenkie de Jong loo doortay kooxda ugu fiican.
Haddaba Madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa kaddib xafladii xalay ka dhacday magaalada Milan ee “The Best”, ayaa wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray:
“Ogolaanshiyaha cusub ee ah inaad tahay ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda kubadda cagta, Leo, hambalyo, waana kaaga mahadcelinayaa inaad naga dhigtay inaan kugu faani karno”.
“Waxaan sidoo kale Hambalyo u dirayaa Frenkie de Jong, kaddib markii loo magacaabay inuu ka mid noqdo 11-ka ciyaartoy ee dunida ugu fiican, waxaana ka sugeynaa isaga wax intaas ka sii badan”.
Waxaa xusid mudan in Lionel Messi uu xilli ciyaareedkii hore uu ku hogaamiyay kooxdiisa Barcelona hanashada horyaalka La Liga ee dalka Spain, isla markaana wuxuu ku guuleystay abaal-marinta kabta dahabka ee gooldhaliyaha ugu sareeya Yurub.
Halka Frenkie de Jong uu ka caawiyay kooxdiisii hore ee Ajax inay ku guuleysato labo koob maxali ah, isla markaana uu u soo saaray wareega afar dhamaadka Champions League, xili sidoo kale uu door weyn ee muuqdo uu ku lahaa kulamadii uu kaga soo muuqday xulkiisa qaranka Netherlands.